စာမေးပှဲ Stress တှကေို ဘယျလိုဖွရှေငျးကွမလဲ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
စာမေးပှဲ Stress တှကေို ဘယျလိုဖွရှေငျးကွမလဲ
စာမေးပှဲတှေ ဖွကွေမယျ့အခြိနျကို ရောကျလာပွီဆိုတော့ ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူတှဟော အနညျးနဲ့အမြားတော့ စိတျဖိစီးမှုကို ခံစားကွရမှာပါ။ စိတျဖိစီးမှုကို အလှနျအကြှံ ခံစားလာရမယျ ဆိုရငျတော့ ကနျြးမာရေးကိုသာမက စာမေးပှဲမှာ ကိုယျ့ရဲ့လုပျဆောငျမှုကိုပါ ထိခိုကျလာမှာပါ။
မိဘတှေ၊ အုပျထိနျးသူတှကေလညျး ကိုယျ့ရဲ့သားသမီးအခွအေနကေို စောငျ့ကွညျ့ပေး နဖေို့လိုပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုမြားနတောကို သိနိုငျတဲ့လက်ခဏာတှကေတော့ စိတျအပွောငျးအလဲမွနျတာ၊ အစားမစားခငျြတာ၊ ဒေါသကွီးတာ၊ အိပျမပြျောတာ၊ စိုးရိမျစိတျမြားတာ၊ ငိုတာ၊ စာမလုပျခငျြတော့တာတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
1. စာဖတျဖို့နရော သတျမှတျပါ။
ဒါကအရေးကွီးပါတယျ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတူနိုငျတဲ့အတှကျ ကိုယျ့အတှကျ စိတျကို စုစညျးနိုငျမယျ့၊ စာကို မှတျမိလှယျမယျ့နရောကို ရှေးပါ။
2. ဘာကိုဖတျရမလဲဆိုတာ သိပါစေ။
တှသေ့မြှဖတျနမေယျ့အစား အရေးကွီးတာကို အရငျဖတျပါ။ ဥပမာ - မေးခှနျးဟောငျးတှေ၊ သိကို သိရမယျ့ဟာတှပေေါ့။ ဒီလိုစနဈတကလြလေ့ာခွငျးက အခြိနျတှေ မပုတျစတေော့ဘဲ စိတျပူပနျတာကိုလညျး လြော့ကစြပေါတယျ။
3. စိတျကို လှငျ့ပြံ့စတေဲ့အရာတှကေို ဖွတျပါ။
ဥပမာ - Facebook, YouTube လိုအရာတှေ။ စာဖတျလိုကျ၊ Facebook လေး သုံးလိုကျလုပျနတောက ဒီတိုငျးဆို မသိသာပမေယျ့ သုံးလိုကျမိတဲ့အခြိနျတှကေို ပေါငျးလိုကျရငျ အံ့သွဖို့ကောငျးအောငျ မြားနတောကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
4. အနားယူပါ၊ အိပျပါ။
အိပျရေးဝအောငျ အိပျပါ။ စာဖတျတာမဟုတျတဲ့ တခွားအလုပျတှေ ဥပမာ - လမျးထှကျလြှောကျတာ၊ အားကစား 10 မိနဈလောကျ လုပျတာမြိုး လုပျပေးပါ။
EC Kidz IA 1
5. အာဟာရပွညျ့ဝစမေယျ့ အစားအသောကျတှေ ကောငျးကောငျးစားပါ။
အာဟာရဓာတျပွညျ့ဝတဲ့ အစားအစာ၊ ဗီတာမငျတှေ ကွှယျဝတဲ့ လတျဆတျတဲ့အသီးအနှံ၊ သဈသီးတှစေားပါ။ Enervon-C Kidz လို လနျးဆနျးတကျကွှစမေယျ့ အားဆေးမြိုးနစေ့ဉျ တိုကျကြှေးပေးလို့လညျး ရပါတယျ။ ကဖငျးဓာတျ၊ သကွားဓာတျတှကေိုတော့ လြှော့ခပြါ။
6. စိတျကိုပွနျပွီး အနားပေးပါ။
ကလေးကို ၅ မိနဈလောကျ တဈနရောမှာ ငွိမျငွိမျလေး ထိုငျခိုငျးပွီး စိတျကိုတညျငွိမျနအေောငျ ဘာမှမစဉျးစားဘဲ ထိုငျနခေိုငျးပါ။
>> မိဘတှကေရော ဘာတှလေုပျပေးရမလဲ?
● ကလေးကို အခြိနျစာရငျးဆှဲဖို့ ဦးဆောငျပါ။
● စားခြိနျ၊ အိပျခြိနျ မှနျအောငျ ဘေးကနေ ဂရုစိုကျပေးပါ။
● အားပေးတဲ့စကားတှပေဲ ပွောပေးပါ။
● စိတျထဲမှာ ပူပနျနတောရှိရငျ မိဘတှကေို ပွောပွဖို့ တိုကျတှနျးပါ။
● ကလေးကို စညျးကမျးရှိအောငျ၊ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိအောငျ အားပေးပါ။
● အရငျက မှားခဲ့တာတှကေို ခဏခဏပွနျမပွောပါနဲ့။
EC Kidz IA 2
စာမေးပွဲတွေ ဖြေကြမယ့်အချိန်ကို ရောက်လာပြီဆိုတော့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေဟာ အနည်းနဲ့အများတော့ စိတ်ဖိစီးမှုကို ခံစားကြရမှာပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုကို အလွန်အကျွံ ခံစားလာရမယ် ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးကိုသာမက စာမေးပွဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုပါ ထိခိုက်လာမှာပါ။
မိဘတွေ၊ အုပ်ထိန်းသူတွေကလည်း ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ပေး နေဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများနေတာကို သိနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်တာ၊ အစားမစားချင်တာ၊ ဒေါသကြီးတာ၊ အိပ်မပျော်တာ၊ စိုးရိမ်စိတ်များတာ၊ ငိုတာ၊ စာမလုပ်ချင်တော့တာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
1. စာဖတ်ဖို့နေရာ သတ်မှတ်ပါ။
ဒါကအရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အတွက် စိတ်ကို စုစည်းနိုင်မယ့်၊ စာကို မှတ်မိလွယ်မယ့်နေရာကို ရွေးပါ။
2. ဘာကိုဖတ်ရမလဲဆိုတာ သိပါစေ။
တွေ့သမျှဖတ်နေမယ့်အစား အရေးကြီးတာကို အရင်ဖတ်ပါ။ ဥပမာ - မေးခွန်းဟောင်းတွေ၊ သိကို သိရမယ့်ဟာတွေပေါ့။ ဒီလိုစနစ်တကျလေ့လာခြင်းက အချိန်တွေ မပုတ်စေတော့ဘဲ စိတ်ပူပန်တာကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။
3. စိတ်ကို လွင့်ပျံ့စေတဲ့အရာတွေကို ဖြတ်ပါ။
ဥပမာ - Facebook, YouTube လိုအရာတွေ။ စာဖတ်လိုက်၊ Facebook လေး သုံးလိုက်လုပ်နေတာက ဒီတိုင်းဆို မသိသာပေမယ့် သုံးလိုက်မိတဲ့အချိန်တွေကို ပေါင်းလိုက်ရင် အံ့သြဖို့ကောင်းအောင် များနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
4. အနားယူပါ၊ အိပ်ပါ။
အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပါ။ စာဖတ်တာမဟုတ်တဲ့ တခြားအလုပ်တွေ ဥပမာ - လမ်းထွက်လျှောက်တာ၊ အားကစား 10 မိနစ်လောက် လုပ်တာမျိုး လုပ်ပေးပါ။
5. အာဟာရပြည့်ဝစေမယ့် အစားအသောက်တွေ ကောင်းကောင်းစားပါ။
အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာ၊ ဗီတာမင်တွေ ကြွယ်ဝတဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့အသီးအနှံ၊ သစ်သီးတွေစားပါ။ Enervon-C Kidz လို လန်းဆန်းတက်ကြွစေမယ့် အားဆေးမျိုးနေ့စဉ် တိုက်ကျွေးပေးလို့လည်း ရပါတယ်။ ကဖင်းဓာတ်၊ သကြားဓာတ်တွေကိုတော့ လျှော့ချပါ။
6. စိတ်ကိုပြန်ပြီး အနားပေးပါ။
ကလေးကို ၅ မိနစ်လောက် တစ်နေရာမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်ခိုင်းပြီး စိတ်ကိုတည်ငြိမ်နေအောင် ဘာမှမစဉ်းစားဘဲ ထိုင်နေခိုင်းပါ။
>> မိဘတွေကရော ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲ?
● ကလေးကို အချိန်စာရင်းဆွဲဖို့ ဦးဆောင်ပါ။
● စားချိန်၊ အိပ်ချိန် မှန်အောင် ဘေးကနေ ဂရုစိုက်ပေးပါ။
● အားပေးတဲ့စကားတွေပဲ ပြောပေးပါ။
● စိတ်ထဲမှာ ပူပန်နေတာရှိရင် မိဘတွေကို ပြောပြဖို့ တိုက်တွန်းပါ။
● ကလေးကို စည်းကမ်းရှိအောင်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိအောင် အားပေးပါ။
● အရင်က မှားခဲ့တာတွေကို ခဏခဏပြန်မပြောပါနဲ့။